Wararka Maanta: Sabti, May 16, 2020-Beledweyne : Dhimasho ka dhalatay fatahaada magaalada Beledweyne
Qofka ku dhintay biyaha ayaa lasheegay in lahelay meeydkiisa saacado kadib markii uu ku dhacay wabiga, waxaana laga helay meel u dhaw kaliga Waraaboole ee galbeedka Beledweyne. Sidoo kale waxaa lasoo badbaadiyay 10 qof oo aay ku jiraan dumar.
Ciidanka Booliska Beledweyne oo badbaadiyay dadka ayaa sheegay inaay halis yihiin biyaha islamarkaana aay muhiim tahay in shacabku uu joojiyo isu-socodka xaafadaha magaalada.
Kiliga Dhagaxjibis oo isku xira gudaha magaalada iyo goobaha loo barakacay ayaay dadku kala kulmaan saameyn aad u weeyn waxaana sanadihii hore ku dhintay dad ka badan 4 qof, balse sanadkan taliska Booliska ayaa ciidan badan ku daadiyay goobaha ugu halista badan ee dadku aay ku dhacaan.
Fatahaada Beledweyne ayaa sanad walba geeysata qasaaro naf iyo maalba leh, welina laguma guuleeysan in xal-waara loo helo dhibaatadan.